Dowladda Kenya oo ka hadashay weerarkii Al-shabaab ee deegaanka Kulbiyow (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Kenya oo ka hadashay weerarkii Al-shabaab ee deegaanka Kulbiyow (AKHRISO)
War-qoraal ah oo goordhaw kasoo baxay taliska ciidanka militeriga Kenya ayaa looga hadlay weerarkii Al-shabaab ay saakay aroortii ku qaadeen saldhiga ciidamada Kenya ee ku yaala deegaanka Kulbiyow ee gobolka J/hoose.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in dagaalyahanda Al-shabaab ay saakay aroortii weerar kusoo qaadeen xerada ciidanka Kenya ee ku taala deegaanka Kulbiyow, iyagoo adeegsanaya gawaari ay wadaan is-miidaamiyaal iyo weerar dhulka ah, balse dib loo celiyay, kadib markii ay isku dayeen inay qabsadaan xeradaas.
Howlgal balaaran oo dhinaca dhulka iyo cirka ah ayaa qoraalka lagu sheegay inay haatan wadaan ciidanka Kenya, kaas oo lagu baacsanayo Al-shabaab.
Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu beeniyay wararka aanay waxba ka jirin oo ay Al-shabaab ku baahiyeen baraha ay bulshada ku xiriirto.
Al-shabaab ayaa baraha ay bulshada ku xiriirto ku faafiyay inay dileen ciidamo Kenyaan oo badan, kadib dagaalkii ay saakay ku qaadeen deegaanka Kulbiyow ee gobolka J/hoose.
Ugu dambeyntii, taliska ciidanka Kenya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada ay ku baacsanayaan argagaxisada, illaa laga xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida dalka Kenya iyo sidoo kale ka qeyb-qaadashada howlgalka AMISOM, si xasilooni loogu dabaalo dalka Soomaaliya.
Hoos ka aqriso qoraalka qoraalka Kenya ay kasoo saartay dagaalka Kulbiyow